Vamwe muNyika Vanoti VaMugabe Ngavasiye Chigaro Vaite Nguva neMuzukuru Wavo Mutsva
Veruzhinji vanoti mutungamiri wenyika VaRobert Mugabe vanofanira kuti vachienda pamudyandigere sezvo vakwegura uye vave nemuzukuru anoda kuchengetwa.
Muzukuru waVaMugabe uyu, Simbanashe Chikore akaberekerwa kuSingapore mwedzi wapera nedangwe raVaMugabe, Bona Chikore. VaMugabe vakasimuka neChishanu vachienda kunomuona nemusi weChishanu.
Zvichakadai veruzhinji vataura neStudio 7 vakaita saVaPhibion Gwaunza vanogara mumusha weGlen View vati VaMugabe, avo vave nemakore makumi mapfumbamwe nemaviri ekuberekwa vave kufanira kusiya basa voenda pamudyandigere kuti vawane nguva yekutamba nemuzukuru sezvo vave sorojena.
Izvi zvatsinhirwa nenhengo yeMDCT, VaShakespear Mukoyi. Asi Va Mukoyi vati VaMugabe havasi munhu anotarisirwa kusiya basa nepamusana pemuzukuru sezvo vachiti mutungamiri wenyika munhu anoda masimba zvikuru. Muzvare Rutendo Shambare vanogara kuHighfileds vatsinhira zvataurwa naVa Mukoyi.
VaFrancis Machimbidzofa vati kuzvarwa kwemuzukuru waVaMugabe wekutanga hakuna chakuchabatsira kushandura nyaya dzematongerwo enyika munyika nokudaro vanoti vemapato anopikisa havafanire kuswerotambisa nguva nekufunga zvemuzukuru waVaMugabe vachiti hazviunze chingwa patafura.
Muzvare Lynette Mudehwe avo vanoshanda nesangano reZimbabwe Activists Alliance vanoti kuzvarwa kwemuzukuru waVaMugabe hakungachinje mafungiro aVaMugabe sezvo VaMugabe pachazvavo vachiti vacharamba vari pachigaro kudzamara vaenda kwamupfiganebwe kana vakaramba vachisarudzwa neveruzhinji.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika VaTjenesani Ntungagwa avo vanoshanda nesangano reRevolutionary Research Institute of Zimbabwe vaudza Studio 7 kuti VaMugabe munhu akabata denga nemufaro zvichitevera kuzvarwa kwemuzukuru wavo.
Amai Bona Mugabe Chikore vakasunungukira kuSingapore mwedzi wapera uye VaMugabe vakaudza nyika yose kuti mwanasikana wavo akaramba kusunungukira muZimbabwe achiti anoda anachiremba vekuSingapore vaanovimba navo.
Mashoko aya akatsoropodzwa nevakawanda avo vanoti zvakaitwa naBona zvinoratidza kuurayiwa kwakaitwa nyaya dzezvehutano munyika nababa vake.